Ungamthuthuzela njani umntwana wakho ngaphandle kokusebenzisa amagama | IBezzia
UMaria Jose Roldan | | Ingcebiso koomama, Oomama
Ukuba umntwana wakho uziva elusizi, edimazekile, engakhathali, njl. Ngamanye amaxesha amagama awadingeki, isenzo sothando siyimfuneko ngakumbi ukuze umntwana wakho azive ethandwa kwaye ekhuselekile. Abantu bayazi ukuba banxulumanisa ubushushu bomzimba kunye nobushushu beemvakalelo. Olu bophelelo lwenzeka kwasebusaneni, xa abantwana befunda ukunxibelelana nobushushu bokubanjwa nokukhuliswa ngabazali babo ngengqondo yokhuseleko nokhathalelo.
Xa umntwana enxibelelana ngokwasemzimbeni nabazali bakhe kwaye esiva imfudumalo yothando olusondeleyo, uya kufunda ukuba nobuhlobo obusondeleyo bokuthenjwa kubo bonke ubomi. Nangona abantu bengakhumbuli besancanciswa, bethuthwe ngumntu ophetheyo, okanye ukuba abazali bethu basinike lonke uthando kunye nothando ngokuwola kwabo, imfudumalo abaziva ukuba iba yinxalenye ebalulekileyo kuthi.
Ukuba ufuna ukuza kumntwana wakho ngexesha loxinzelelo lweemvakalelo, ngamanye amaxesha akukho mfuneko yokusebenzisa amagama ukuyifumana. Emva koko siza kunika ezinye izimvo ukuze ukwazi ukuhambisa intuthuzelo kunye nokukhuseleka ngamaxesha abuthathaka.
1 Nyusa ubushushu ekhaya
2 Isuphu okanye itshokholethi eshushu
3 Yima ecaleni komntwana wakho
Nyusa ubushushu ekhaya
Yiba nobushushu obutofotofo ekhaya ukuze abantwana bazive besondele kubantu ababangqongileyo. Kwisifundo seDatshi, abaneminyaka emi-4-6 ubudala banikwe izitikha ezimibalabala kwaye baxelelwa ukuba bangabelana ngazo nomhlobo. Abantwana kwigumbi elifudumeleyo babekulungele ngakumbi ukwabelana ngezitikha zabo kunabantwana kwigumbi elipholileyo.
Ukongeza, uphononongo lufumanise idatha ebaluleke kakhulu: kuphela abo bantwana bafumaneke ukuba banamathele ngokukhuselekileyo kubazali babo babelana ngezitikha kwigumbi elifudumeleyo. Obu bubungqina obungaphezulu bokuba ubudlelwane obungazi nto phakathi kobushushu obufudumeleyo kunye nokufudumala ngokweemvakalelo kusekwe kwasekuzalweni.
Isuphu okanye itshokholethi eshushu
Kubonakala ngathi ayinanto yakwenza nokuziva ulungile ngokusela into eshushu, ingayichaphazela njani indlela esiziphatha ngayo? Kukho unxibelelwano olomeleleyo phakathi komzimba nengqondo ebonakalisa xa sisela iziselo ezishushu. Kukho izifundo ezibonisa indlela izinto ezahlukeneyo ezibuzwe ngayo kubathathi-nxaxheba ezichaphazele indlela abaziphethe ngayo.
Isiqingatha sokuqala sabathathi-nxaxheba baceliwe ukuba babambe into eshushu, njengekomityi yekofu eshushu, kunye nesiqingatha bacelwa ukuba babambe into ebandayo, njengekomityi yekofu yomkhenkce. Abathathi-nxaxheba bebengenalo nofifi lokuba le yayiyinxalenye yesifundo. Emva koko baye kwiimvavanyo ezahlukeneyo ezilinganise indlela abaziva ngayo. Kuzo zonke izifundo, izifundo ezazifudula zinekofu eshushu zazinethuba lokuziva zifudumele kwabanye kunabo babenekofu.
Yima ecaleni komntwana wakho
Izazinzulu nge-Neuroscientist ziye zafumanisa ukuba inxenye yengqondo ebizwa ngokuba yi-insula iyenziwa ukuba iphendule kuzo zombini ezi ntlobo zobushushu: xa umntu echukumisa iphedi yokufudumeza okanye xa ethumela imiyalezo kusapho nakubahlobo. Icandelo elithile elahlukileyo le-insula liyasebenza xa umntu egodola okanye xa ephathwa kakubi okanye engcatshwa ngomnye umntu. Ukuthintela le mvakalelo imbi, hlala kunye nomntwana wakho kwaye umwole ukuze azive ukuba usecaleni lakhe ukumkhusela ngalo lonke ixesha.
Ezi ngcebiso zokuthuthuzela ngaphandle kokusebenzisa amagama zikwalungele, kuba nokuba uzisebenzisa nabantwana bakho, zinokuhamba kakuhle xa unengxaki okanye uzive uxinezelekile emphefumlweni. Zizinto ezilula onokuzenza ngendlela elula kwaye ufumane umzimba ongcono kunye nokufudumala ngokweemvakalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ungamthuthuzela njani umntwana wakho ngaphandle kokusebenzisa amagama
Uyenza njani imaski yokulwa inkwethu ekhaya